/Blog/Gallery/Torolàlana feno hividianana 2019 Ho an'ny fananganana bodybuilding SARM SR9009
Posted on 10 / 14 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
SR9009 na stenabolic dia fanampian'ny CAS 1379686-29-9 izay maka tahaka ny vokatry ny fanazarana kardio. Tsy ny fanafody ihany no hanampy anao hanapaka ny be loatra amin'ny vatanao tafahoatra, fa hampiakatra ny herinao koa izy io rehefa hampitombo ny fiaretana.
SR9009 SARM dia manana anjara toerana lehibe amin'ny famporisihana ny Rev-Erb. Io proteinina io dia misy fiantraikany amin'ny fahafahan'ny vatana handoro tavy, siramamy ary kolesterola ratsy. Noho izany, manentana ny fizotran'ny lanjany raha manatsara ny fiaretana. Na dia manao fanazaran-tena aza ianao dia hahatsapa ho mazoto sy tsy dia sasatra loatra, mba hahafahanao manao fanazaran-tena bebe kokoa.
Stenabolic metabolizes tavy, lipids ary siramamy. Raha ny kalitaon'ny solika ao amin'ny vatana no tsara indrindra, dia azo antoka fa hahatratra ny tampon-tampony ianao. Ao amin'ny fandinihana mialoha dia mampiasa modely murine, ireo totozy izay tao ambanin'ny SR9009 vovoka (Ny 1379686-30-2) dia mety hihazakazaka indroa haingana kokoa noho ny teo aloha. Ity porofo ity dia mety ho antony nahatonga ny stenabolic voatanisa teo amin'ireo zava-mahadomelina voarara amin'ny atletisma.
Raha toa ka tsy katroka miasa ianao, ity vaovao ity no tian'ny sofinao ho henoina. Stenabolic koa dia mampitombo ny tahan'ny metabolic anao raha miala sasatra ianao. Rehefa avy misakafo ianao, ny vatanao dia manova ny sakafo ho tavy. Na izany aza, ny fihenan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanja SR9009 dia hampisondrotra haingana ny metabolismo ka manomboka handoro io tavy io ianao.
Ny SR9009 SARM dia manatsara ny fomba metabolika. Rehefa vita ny fanadiovana, ny stenabolic dia handrindra ny vatana handoro ny kaloria be loatra fa tsy hampiova azy ireo ho matavy. Tsy ny fototarazo fotsiny no manafaka ny fototarazo, fa manena koa ny famokarana sela matavy vaovao ao anaty atiny.
Io fanampin-javatra io dia tsy mampitombo ny ahetsiky ny hozatra fa manatsara ny heriny sy ny asany. Ny fahatsapana azonao rehefa avy nitantana ny fatra SR9009 dia mitovy amin'ny manitatra.
Miankina amin'ny klinika, ny SR9009 dia mahasoa ireo zokiolona mijaly amin'ny fihanaky ny hozatra na ny sarcopenia.
Ny ankamaroan'ny mpanao fanatanjahan-tena dia tsy hanadino ny hampiditra rongony SR9009 fahazoana zava-mahadomelina amin'ny fitomboan'ny fanatanjahan-tena. Hampifarana lanja ianao, hihazaka ny tohatra, na manao fanatanjahan-tena izay tsy mahatsiaro ho reraka na ho maizina.
Tsy isalasalana fa ny fanampim-panafody dia handray ny zava-bitao ambony noho ny teo aloha. Raha nieritreritra ianao fa fisolokiana ireo tombon-tsoa SR9009 ireo dia angamba manontany tena ianao hoe maninona ny masoivoho manohitra doping dia hanakana mafy ny fampiasana azy amin'ny fanatanjahantena mifaninana.
Raha ny filazan'i Thomas Burris, ilay mpanorina ny Stenabolic, dia manova anao ho atleta efa zatra ao anaty fotoana ny fanafody. Tsy ho lany hery na hery ianao na dia manao fanazaran-tena mafy aza.
Noho ny ora fohy fohy an'ny SR9009 dia ho vetivety foana ny fiomanana. Noho izany, tsy ho insomnia ianao mandritra ny andro iray.
SR9009 antsasaky ny fiainana dia fohy raha efatra ora. Noho izany antony izany dia mila manasaraka ny fatrao amin'ny elanelana adiny efatra ianao mba hampitoniana ny bioavailability momba ny zava-mahadomelina amin'ny lalan-drà.
SR9009 fatra amin'ny bisikileta maromaro. Izany hoe izay tianao ho tratrarinao ary na ampidirinao sakafo hafa amin'ny tsingerinao izany. Ankoatra izany, ny habetsaky ny fanafody dia miankina amin'ny fihetsiky ny vatanao ihany.
Stenabolic dia tsy a steroid. Noho izany, ny fitondrana azy dia tsy hanelingelina ny rafi-pitatitra. Tsy hitete ny haavon'ny testosterone anao, ary tsy hitombo ny zava-mahadomelina amin'ny estrogen. Ho an'ny vehivavy dia tsy hiafara amin'ny fihodinan'ny fadim-bolana eo amin'ny masony.
Araka ny efa fantatrao, ny stenabolic dia manana antsasaky ny fiainana haingana, izay tsy haharitra anao mandritra ny andro. Ny mifanohitra amin'izany, ny bioavailability ny kardinaly dia maharitra amin'ny ora 24. Ny fampifangaroana azy roa dia hiteraka vokatra 24 / 7.
Rehefa eo amin'ny fametrahana SR9009, ny dosage dia 10mg ihany, izay tsy maintsy alainao vetivety alohan'ny fiasana. Ho an'ny GW501516, ny fisakafoanana tsara dia 20mg / andro, izay harahinao amin'ny sakafo maraina.
Nisy ny tsikombakomba fa ny SR9009 dia manana bioavailability zero, indrindra amin'ny fitantanana am-bava. Na izany aza, azoko antoka ny mandà izany satria raha tsy bioavailable ny fanampiny dia tsy hisy valiny SR9009 tsara amin'ny vatan'olombelona.
Ireo bodybuilders izay aorian'ny fampitahorana na fanendahana dia hahazo tombony betsaka amin'ny SR9009. Amin'ny toe-javatra izay tsy maintsy hampiofananao mafy kokoa, ny zava-mahadomelina dia mampitombo ny taha ambony indrindra amin'ny fonao, ka mametra ny fanaintainana sy ny havizanana. Ny tena marina dia ny fihenan'ny fananganana bodybuilding SR9009 dia mampihena ny fivontosana sy ny fanimbana amin'ny hozatra mba ho haingana haingana ny dingana fanarenana.
Na izany aza, ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina dia dia taolana fifamaliana teo amin'ny mpahay siansa sy ny mpikaroka ary ny mpahay siansa amin'ny ankapobeny. Ohatra, efa nisy ny anecdotes fa ny zero bioavailability am-bava ny SR9009. Eny, tsy te-hanao mpisolovava ny devoly aho, fa ny 95% ny mpampiasa stenabolic dia manamafy ny mahomby azy. Ankoatr'izay, ianao dia tokony hametra-panontaniana hoe maninona ireo fikambanana anti-doping dia manana ny hozatra hampiato ny fampiasana azy amin'ny atleta raha tsy ilaina ny vokatra.
Ny fiheverana mahazatra matetika eo amin'ny tontolon'ny steroids anabolic	Ny zavatra rehetra momba ny Oxandrolone (Anavar), mila fantatrao
Tretolone Acetate (MENT) vovoka
Powder acetophenide algestone (DHPA) Powder (24356-94-3)